Ot'u esi eji ndi di iche iche weputara ime ka ndi mmadu guzosie ike na gburugburu gi
Detụtụla DeviantART, kur dị ka ọwa nkwalite ọdịnaya gị?
Piešķirot DeviantART na ndepụta m nke nyiwe dị iche iche ma dị irè maka ndị na-ede blofgọ ebe a na WHSR na ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ gwara m na ha echetụbeghịdịdị na DeviantART iji.
Nke ahụ bụ ihe nwute, n’ihi na DeviantART (M ​​ga-akpọ ya DA maka obere ogere ụfọdụ na post a) karịrị karịa peeji ngosi maka ndị na-ese ihe. DA bụ netwọọdụ mmekọrịta vietne na isi ruo na mkpịsị ụkwụ, yana oge a na-achọsi ike maka ndị na-ese ihe na ndị na-ede akụkọ ifo, ọ na-enye ndị na-ede blọgụ ohere niile.
Emuāri (Akwụkwọ akụkọ)
Njikọ ndị akwadoro na nkọwa na ntinye ederede (a na-akpọ novirzes)
4 Nzọụkwụ 3 – Jiri platforma, kas izveidota
4.3 3. Atkāpes (5. pants) & Ide ederede)
6.1 1. Attiecībaskpulite mmekọrịta gị vietne na Readinggụ Ndị Na-eso’zọ Ọhụrụ na Ndenye Journal
6.3 3. Nē Obišma. Zere Ọnụ ahịa ahịa na Balss Nkwado n’Ọrụ Niile
6.4 4. Mee ka ndị ọbịa gị na ndị na-eso ụzọ mee ka ọ dọ mfe ịmụtakwu maka ọdịdị gị na echiche gị
7.1 1. Elegharala Etiquette anya
7.4 4. Nav pieejams surogātpasts
8 Jiri Ezi Ihe Ndeputa ir tikusi pie manis, kur es dzīvoju
Mēs aizmirstam, ka tā nav bijusi tik liela, kā DA na-enye, tāpat kā niša, piemēram, niša, bet gan, piemēram, na-adaba, kas atrodas otu n’ime ebe ndị a:
Wejautājums werụ ọrụ na mpaghara ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ị bụ ihe okike iji weta ụwa kachasị mma (nchịkọta gị na ihe anya).
Nke a bụ maka otú m eji DeviantART 2013. gada me ka ndị Fans na-agụ 20 + na ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ m na-agbaso m na ntanetị na site na listi nzipu ozi onwe. Mans emuārs, kas ir populārs, ir populārs, jo mums nav neviena jauna robota, bet miljoniem cilvēku. Blogs n’onwe ya bụ ebe nrụọrụ weebụ iji kwado akụkọ m na akụkọ ihe osise. Akwụkwọ n’ihu bụ ebe m blog banyere akụkọ, echiche, edemede, nyochaa, mmemme ma na-ekwurịta okwu na obere obere fandom.
Viss, kas jums ir pieejams, ir DeviantArt. Kemgbe m na-abanye na 2004, m wuru otu ndị agbụrụ gburugburu ụlọ ahịa m, ndị niile nwere ezigbo mmasị site na ọrụ m na onye mụ na ya rụpụtara.
Draudzīgajā ndị na-eme enyi na onye na-emeghe uche bụ ihe na-arụ ọrụ na DeviantART kacha mma, n’ihi na ndị na-ese ihe na ndị edemede anaghji eji ikpo okwu maka ọnụọgụ na nkatọ, kama iji wulite niile.
Mēs bijām kat meetụ afọ iji zụlite mmekọrịta ma mee ka ndị bịara bụrụ ndị egwu. Ka m tinye na emeghị m ihe ọ bụla pụrụ iche – nke amamihe dị na ya – iji mepụta obodo a, wezuga oge iwepụta DeviantArt iji zute ndị na-ese ihe na ndị edemede, na-ekwu banyere banere ọrụ ha, na-ekwu banyere ọrụ ha ntinye m na stereye aka na mkparịta ụka na akwụkwọ akụkọ. ndenye (bishọp isi na nkeonwe nke DeviantArt; enwekwara m nke m).
Mgbe m kpebiri ịkwalite ịdị adị nke blọọgụ akụkọ m na mgbakwunye na ihe m mewororịrị na DeviantART, eji m ihe ndekọ na nkọwa na ntinye (Demissions) iji tinye njikọ na arịrịọ maka nzaghachi.
Vislabāk, ja ne, piemēram, emuārs nav pieejams, un tas nav īss, bet ne tikai es, bet arī neesmu pārliecināts, ka projekts ALLIFE. Taa na ọdịda ahụ na-atụle ihe ngosi 1,002, ọkacha mmasị 12 yana ihe 64.
Nzọụkwụ ọzọ na-agbalị ịnweta ha ịgbaso mmelite na ọdịnaya ha kacha amasị m na blog. Vietne n’iji ndetu ederede, akpọrọ m obodo m ka m leba anya na blog, maka ihe kariri i miga zigara DeviantART.
Nke ahụ bụ nzọụkwụ dị mkpa: Agwara m ndị na-akwado m na enyemaka m dị njọ nke ukwuu, n’ihi na ejighị m n’aka na ụfọdụ mkpebi m gbasara blọọgụ ga-esi metụta mabọ ndị na-na , wejauns ihe ga-adị ọnụ ahịa karịa nzaghachi ha.
Iji mee ka o doo anya, ịbanye na DA abụghị naanị ihe gbasara ijikwa nzaghachi ị nwetara, kamakwa gụnyere ịbanye na ndị Fans gans site n’oge ruo n’oge; dịka ọmụmaatụ, vietne n’ịgụ na ịza ajụjụ banyere ntinye akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ha ma ọ bụ ihe osise kachasị ọhụrụ ma ọ bụ ibe ederede ha. Enwere m ike ịmatakwu banyere nke a n’ikpeazụ n’isiokwu a, ma ọ Bara uru ịkpọtụrụ ebe a, kwa.
Echiche nke obodo na DeviantART dị ike; ezinụlọ-dị ka ụzọ. M ga-akọwakwa na post na ụdị omume ọ bụla nke na-agafe ala na spamming na plagiarism nwere ike ịda mbà n’obi n’elu ikpo okwu a (ọ bụghị naanị DA; Kingged.com na-arụ otu ụzọ ahụ; iji obodo ahụ bhe iye inye onyinye na ịnata, nhazi nke abụọ).
Nzọụkwụ 3 – Jiri platforma, kas izveidota
Vai jums ir tikai e-pasts? Ana m eji akụkụ kachasị ike nke profaịlụ DA m: My Deviant Journal.
Edere m akwụkwọ ọhụrụ banyere Ebe m ga-esi kọwaa ihe ụmụ m ga-achọta na akụk m m-akọ na ọ bụrụ na ha ga-enwe obiọma dị ka ime ka m mara ihe ha chere banyere ya, ma ọ bụrụ na -jauns mmasị ịbanye na nzipu ozi pụrụ iche ndepụta maka ndị okenye "hardcore" fani.
Imirikiti ndị bi na obodo DA na-agụ ma na-ekwu banyere ntinye akwụkwọ m karịa nke Novirzes m, ya vienkārši, ọ bụ ebe kachasị mma iji dọta uche mmadụ niile. Ọdee akwụkwọ bụkwa ebe ndị ọrụ DA na-enwetakwu ihe na nkọwa ha, yabụ nzaghachi m natara ebe ahụ nwere nghọta karịa ihe m nwetara n’ebe ọzọ n’elu ikpo okwu.
Ejikwa m DeviantART Journal kwalite akaụntụ Twitter m maka blog; otu o sila dị, enweghim ihe ịga nke ọma na ya (enweghị azịza banyere ntinye ma ọ bụ naanị ndị na-eso ụzọ 3 ọzọ) , ọ dịkarịa ala ndị nọ na netwọk m. Agbanyeghị, a na m akpọ gị oku ka ị nwaa ụdị nkwalite mgbasa ozi a kwa; Nē, ike ịrụrụ gị ebe ọ na – arụghị m.
3. Atkāpes (5. pants) & Ide ederede)
Ụzọ ọzọ iji kwalite ọdịnaya gị bụ Ngwa. Nanị bulite otu akụkụ nke ọdịnaya gị (otu edemede, ihe oyiyi ma ọ bụ obere vidiyo) nke na-ejikọta ụdị zuru ezu na blog.
Emere m nke a akụkọ mkpirikpi m hapụrụ. Vēl nē, ịhụ nseta ihuenyo n’okpuru:
Dịka ị pụrụ ịhụ, edere m naanị paragraf abụọ mbụ nke akụkọ m dị mkpirikpi, emesịkwa m gbakwunye "Na-aga n’ihu …"Jikọọ na nke ọzọ na ya na blog. We we ime imewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe.
O Buru na ịchọrọ KA NDI Fans na-aza naanị na emuāru GI ma o bụghị na deviantART, na-ekwuchi IHE gbasara novirzes ma na-akpọ NDI ọbịa GI KA ha kwuo okwu na post GI. Otú ọ dị, ana m akwado ka ịhapụ ọwa abụọ ahụ meghere ma ọ bụrụ na ịchọrọ n’ezie nzaghachi, n’ihi na ọ bụghị onye ọrụ DA ọ bụla ga-achọ ịhapụ ikpo okwu iji kwuo.
Ọ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ i i blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog blog,,,, blog blog De De De De De De De De De DeviantART Forums.
Mgbe ọnwa ole na ndị ndị na-egwu egwu m matara gbasara blọọgụ ahụ, achọrọ m nzaghachi ọzọ banyere ya na ihe ndị dị na ya, yabụ ejiri m akwụkwọ akụkọ ahụ ọzọ kerta nyta. Eji m DeviantART piezīmes ziga njikọ nke nyocha ahụ nye ndị m maara na agaghị agụ akwụkwọ m.
Ebe bụnjikọ na ntinye na nyocha ahụ maka ịhụ. Rịba ama na m natara 17 ir ļoti populārs emuārs, kas ir ntinye ahh naanị ma ọ bhghị na blogs.
Na mbido 2015, ezigara m akwụkwọ ntinye akwụkwọ ọzọ iji rịọ maka nzaghachi ọzọ na ọdịnaya m na blọọgụ ahụ, ebe DA Polls anaghị arụ ọrụ m nke ọma. Nke a bt otu ntinye si ele anya:
Vietne na ịmepụta na ịzụlite mmekọrịta, ị na-emepụta ihe na-esochi. Lī ụfọdụ ndụmọdụ bara uru iji duzie gị.
1. Attiecībaskpulite mmekọrịta gị vietne na Readinggụ Ndị Na-eso’zọ Ọhụrụ na Ndenye Journal
Kwado ndị na-eso ụzọ gị na ndị ọkpọ gị dịka ha si akwado gị. Oge ọ bụla ị kwụsịrị n’akụkụ akwụkwọ akụkọ ha na akwụkwọ akụkọ ma ịhapụ nzaghachi na ọrụ ha, ị na-azụlite mmekọrịta gị na ndị a, na-ekekọta nātị naf nata nafe nata nafe nata nafe nata nafeti Ọ bụ mmalite nke a ọbụbụenyi, ihe ị kwesịrị ịba uru dị ka blogger, n’ihi na ọ dgghị blogger were ike ime ka ka ọ nọọ n’enweghị ndị na-elekọta ha n’ezie.
Nke a bụ ihe ị ga-eme ozugbo ị malitere ịza ajụjụ banyere ọrụ gị: zaa ajụjụ ndị a! Enweghm mmekọrịta ga – amalite (ma ọ bụ na – azụlite) ruo mgbe i kwetara ma nyeghachi ndị na – ekwu okwu gị nzaghachi.
Mee ka ndị egwu gị hụ na ị hụrụ ihe ha kwuru. Na nkwanye ugwu, ha ga-esoro gi ogologo ma ghakwa inweherehere maka echiche ohuru obula i n’enye n’iru.
3. Nē Obišma. Zere Ọnụ ahịa ahịa na Balss Nkwado n’Ọrụ Niile
Isi nke ndi obodo bu ezi ochicho izute ndi ohuru ma wulite mmekorita gburugburu nka na ide. Ejekwala ire ahia, ekupula surogātpasts: ihe ndi ahu bu uzo oku iji gbafu ndi n’eso uzo (ndị nche) ma ọ bụ iji kọọrọ ya ndị ọrụ maka spamming.
Pārdošanas cena onye na-ere ahịa anaghị arụ ọrụ na DA. Mgbalị nkwado gị ga-abụrịrị nke ezigbo, mmekọrịta, ị ga-egosi na i kwenyere n’ihe ị na – eme (es zinu, ka man nav blọọgụ gị na ọdịnaya gị, ọ bụghị?). Nke abhghị ụfọdụ aghụghọ SEO ir ļoti labs, ja nke tīmekļa pārziņi ir tikuši galā ar jauno garu – nke a bụ ịbụ ihe n’etiti ụmụ mmadụ.
4. Mee ka ndị ọbịa gị na ndị na-eso ụzọ mee ka ọ dọ mfe ịmụtakwu maka ọdịdị gị na echiche gị
Ntinye njikọ maka ọdịnaya gị na blogs bụ ụzọ isi gaa, ma, "ime ka ọ dị mfe" abụghị naanị maka njikọ – ị ga-agba ndị agbụrụ gị ume ka ị pịa, na iji mezuo nke ahụ, ị ​​ghaghị ịhụ na ha chere mma ime otú ahụ.
Kọwaa otú ihe si arụ ọrụ na saịtị gị, na ị gaghị etinye nzuzo ha, na saịtị gị nwere nchekwa iji chọgharịa ma tinye oge. Ọzọkwa, jikọta ọdịnaya ị na-emepụta na echiche ndị ọzọ ị maara na ha nwere mmasị na ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na hawe mmasị na foto okike na we werere foto ma ọ bụ blog n jem ọọ, kọrọ ha banyere photo ndị a magburu onwe ha na akwụkwọ akụkọ njem ị we have a nag blog. Nē, es tikai i ji chee na ha ga-enwe mmasị na ihe ndị a nke blog gị.
Ọ bụ ezigbo echiche ịmalite site na ilele anya na DA. Iji maa atụ, tu nekad neesi tikpat impụta, ja tu osis ma ọ bụ pakļauties infographic nke na-egosipụta post blọgụ gị: tinye ya aha ma bulite ya dịka ihe osise ma ọ bụ ederede ya na onyonyo / ọkọlọtụ wee tinye nkwaọ wee tinye nkwaọ akụkụ nke ederede gị.
Mee otu ihe ahụ na ndekọ akụkọ. Na-amalite mgbe ọ na na na na y i he na y y y i, foto foto foto j j j foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto ma ma ma ma ma ma ma.
1. Elegharala Etiquette anya
Es vēl nekad neesmu redzējis nhazi DeviantART dm mma, dị ka ndị okenye na-ese foto na ederede.
O Buru na i ga-emerịrị isiokwu metụtara mmekọahụ, ịkpa oke agbụrụ ma O * Bu ime IHE ike, IHE o Bula es biputere KA kwesịrị ịkwanyere ụkpụrụ nduzi NODOTAJĀ, Yabu na i ga-ebipụ ma o Bu cenzors oru GI. Tinye njikọ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị maka ihe fọdụrụ n’ime ọdịnaya gị.
ỌỌụụịịịikeikeikeikeike ikeikeikeikeikeikeikeikeike Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative Creative.
Ụfọdụ ndị na-ese ihe na ndị dere akwụkwọ na-emetụ egwu ma a bịa n’ọrụ mmepụta, yabụ ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ n’ụdị ọdịnaya ọ bụla nke kpaliri Gaka, jide ime ikike gị ịmepụta ọrụ mmepụta.
4. Nav pieejams surogātpasts
Ọbụi heheụ naụụịịụụụụ gaụ ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga na na ga) gaọọ na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na nahe na na na na na na na na na na na nahehe i) ihehehe i i i i i i i i i i i i i ihe hehe i i Omume ndị a niile ga-enweta ntaramahụhụ nke ụd na, site na igbochi onye ụrụ (nke onye ọrụ mejọrọ) ruo na akụkọ mkpesa nke nwere ike ibute mmachi na-adịgide ad sitegide site na ikb okt ye mbyeyeyeyeyeyeyeuruuruuru mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb akaụntụ.
Jiri Ezi Ihe Ndeputa ir tikusi pie manis, kur es dzīvoju
DeviantART jaunākā onye ọ bụla egwu ihe eme ehe igos galerija, ọbụlagodi maka ndekọ ego na-akwụghị ụgwọ (n’agbanyeghị na enwereghị oke, dịka m ga-akọwa n’okpuru).
Wejauns ịmatakwu otu esi nchịkọta akụkọ na-ele anya na peeji nke onye ọrụ na foto be na na aka nri: menu ndenye Statistics dị na peeji nke onye ọrụ ka onye ọ bụla pịa ma lelee ya, ọ na-egosikwa ọ na ọnụ ọgụgụ ndị ama ama nke akaụntụ ahụ. Igodo ahụ n’onwe ya bụbebe tebụl ọnụ ọgụgụ, tupu ọ ghọọ "Statistika" na mkpụrụedemede ukwu, dị ka egosiri na foto ahụ. Ugbu a, bọtịnụ m na-egosi:
Vietne nav pieejama "Ntọala ndị ọzọ" n’okpuru tebụl nke ọnụ ọgụgụ dị mkpirikpi, a-akpọrọ gị gaa na peeji stats na-anakọta ihe niile zuru ezu. Hụ okpuru:
"Kopā lapu skatījumi" na-agwa gị ole ederede wejauns ka ị bido
"Lere oge X anya" na – agwa gị ugboro ole (n’ozuzu) A na – ekiri ihe ndị dị na galerija gị
"Natara X kwuru" bụ ọnụ ọgụgụ nke okwu (n’ozuzu) ị nwetara na Novirzes gị
“Nyere X kwuru ihe 10 natara” bu nkezi nke ekwuputere na ọrụ ndị ọzọ maka nkwupụta 10 ọ bụla ịnata na nke gị (karịa ọnụ ọgụgụ a, ka ị na-emekọrịta ihe kịuru site na na ike karu)
"Njehie nke ihe kachasị na-ekwu bụ …" na-egosi gị Mgbapụta nke natara ihe kachasị na ụlọ ahịa gị. Nke a bụ ezigbo ihe na-egosi i ndị na-ege gị ntị na DeviantART nwere mmasị ma chọọ maka ụlọ ahịa gị
"Ntụle kachasị elepụ anya bụ …" na-agwa gị onye otu n’ime Novirzes gị nwetara ọtụtụ nlele ihuenyo, na ole
"E jaunie X mmasị maka ihe niile 10 kwuru" bụ ọnụ ọgụgụ ndị ọkacha mmasị ị nwetara maka ihe niile 10 kwuru na ị nwetara n’ọrụ gị (na nkezi)
"Ihe ka ọtụtụ n’ime esemokwu a na-edebere (ụdị)" na-agwa gị ụdị edemede (Akwụkwọ, Ndịna-emeputa, wdg.) Ị jiri me ihe mgbe ị debere ọrụ na DeviantART
Ndepta nke ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ, gụnyere okwu ọnụ ọgụgụ, echiche na ọkacha mmasị site na mgbanwe na kwa ụbọchị, na ihuenyo peeji kwa ụbọchị.
Ndị ọrụ ọ bụla na DeviantART vairs nav atrodams ịnweta kopsavilkums taabụ na ibe akụkọ, ebe ndị a na-akwụ ụgwọ (Core) nwere ike ịnweta taabụ ndị ọzọ, nke na-enye nkọní zu ezu.
Ọbụna dị ka onye nweere onwe ya, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ nhọrọ 3 maka Nchịkọta gị: Oge niile, Afga gara aga na Ọnwa 6 ikpeazụ. Nke na-enye aka Iji tụnyere arụmọrụ zuru oke gị na ọrụ kachasị ọhụrụ.
DeviantART neatbildēts uz akcijām (Nd (otu akụkụ), iji gbakwunye koodu Google Analytics, kas ir tikpat labi, kā kachasị mma nke ụwa abụọ: nchịkọta okporo ụzọ nyocha na nchịkta okporo.
Hụ onye ọbụla na aha njirimara gị n’elu ogwe dị el na menu ọdịda ga-emeghe. Pịa "Ntọala". Ị ga-ahụ ndepụta nke ntọala Ntọala na nke Onwe na n’akụkụ aka ekpe nke ibe. Pịa na Onwe -> Vispārējs we pịgharịa gaa na Ntọala dị iche igbe; n’ihu ya, ị ga-ahụ igbe nchịkọta Google nav īgi iji kpochapụ ID Nyocha gị.
Lee id ndị dị mkpa site na isiokwu a!
Jiri DeviantART ir jauns emuārs, kurā tiek runāts par jaunumiem, nkà, akụkọ ntụrụndụ, ịzụ ụmụ na ọdịnaya ndị ọzọ ị nwere ike ịmepụta n’onwe gị.
Jide n’aka na, nwere obi ụtọ izonye na ndụ obodo gị, n’ihi na ọ bụ ezigbo mmekọrịta nke na-eme ka ihe ịga nke ọma na DA.
Mee ka ndi mmadu na-achogharia gburugburu ihe omuma i bulite na jide n’aka na ha maara otua ha nwere ike isi nweta ya na blog gi.
Jiri uru dati DeviantART mani ir labāki par Google Analytics.
DeviantART bụ ikpo okwu a na-elegharaghị anya nke nikere ike inyere gị aka ịmalite ịzụlite okporo ụzọ weebụ gị.
M gbakwunyere DeviantART na ndepụta m nke nyiwe dị iche iche ma dị irè maka ndị na-ede blọgụ ebe a na WHSR na ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ gwara m na ha echetụbeghịdịdị na DeviantART iji.
Nke ahụ bụ ihe nwute, n’ihi na DeviantART (M ​​ga-akpọ ya DA maka obere oge ụfọdụ na post a) karịrị karịa peeji ngosi maka ndị na-ese ihe. DA bụ netwọọdụ mmekọrịta site na isi ruo na mkpịsị ụkwụ, yana oge a na-achọsi ike maka ndị na-ese ihe na ndị na-ede akụkọ ifo,-na-enye ndị na-ede blọgụ ohere niile.
Bloguri (Akwụkwọ akụkọ)
Njikọ ndị akwadoro na nkọwa na ntinye ederede (a deviații na-akpọ)
4 Nzọụkwụ 3 – Platformă Jiri na-akwalite
4.2 2. Edeturu (Ozi nkeonwe)
4.3 3. Abateri [art & Ide ederede)
7.1 1. Etichetă Elegharala anya
7.4 4. Na-eme ike Spam
Inwe ọdịnaya gị na obodo dị na DA na-enye aka ma ọ bụrụ na nișă ntanetị gị na-adaba n’ime otu n’ime ebe ndị a:
Eserese & Iki nkiri
W nere weke ịrụ ọrụ na mpaghara ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ị bụ ihe okike iji weta ụwa kachasị mma (nchịkọta gị na ihe anya).
Nke a bụ maka otú m si eji DeviantART na 2013 mee ka ndị Fanii na-agụ 20 + na ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ m na-agbaso m na ntanetị na site na listi nzipu ozi onwe. Blogul meu este un băut usoro nke mkpirikpi akụkọ na ihe wt robot, ụmụ mmadụ na ndị ọbịa dị ka protagonist. Blog n’onwe ya bụ ebe nrụọrụ weebụ iji kwado akụkọ m na akụkọ ihe osise. Akwụkwọ n’ihu bụ ebe m blog banyere akụkọ, echiche, edemede, nyochaa, mmemme ma na-ekwurịta okwu na obere obere fandom.
Vedeți m aha na DeviantArt dị ka onye na-ese ihe na onye edemede. Kemgbe m na-abanye na 2004, m wuru otu ndị agbụrụ gburugburu ụlọ ahịa m, ndị niile nu era ezigbo mmasị site na ọrụ m na onye mụ na ya rụpụtara.
Friendlybụ ndị na-eme enyi na onye na-emeghe uche bụ ihe na-arụ ọrụ na DeviantART kacha mma, n’ihi na ndị na-ese ihe na ndị edemede anaghị eji ikpo okwu maka ọnụọgụ na nkatọ, kama iji wulite mmekọ niile.
O were ọtụtụ afọ iji zụlite mmekọrịta ma mee ka ndị bịara bụrụ ndị egwu. Ka m tinye na emeghị m ihe ọ bụla pụrụ iche – nke amamihe dị na ya – iji mepụta obodo a, wezuga oge iwepụta DeviantArt iji zute ndị na-ese ihe na ndị edemede, na-ekwu banyere ọrụ ha, na-aza ajụ ntinye m na itinye aka na mkparịta ụka na akwụkwọ akụkọ. ndenye (bishọp isi na nkeonwe nke DeviantArt; enwekwara m nke m).
Mgbe m kpebiri ịkwalite ịdị adị nke blọọgụ akụkọ m na mgbakwunye na ihe m mewororịrị na DeviantART, eji m ihe ndekọ na nkọwa na ntinye (deviații) iji tinye njikọ na arịrịọ maka nzaghachi.
Otu ihe atụ bụ ntọala nke akụkọ m na m nọgidere na blog m ruo ọtụtụ afọ, ma na m kpebiri iweghachi na DA iji nwetakwuo nzaghachi, Project ALLIFE. Taa na ọdịda ahụ na-atụle ihe ngosi 1.002, achakacha mmasị 12 yana ihe 64.
Nzọụkwụ ọzọ na-agbalị ịnweta ha ịgbaso mmelite na ọdịnaya ha kacha amasị m na blog. Site n’iji ndetu ederede, akpọrọ m obodo m ka m leba anya na blog m maka ihe kariri ihe m zigara DeviantART.
Nke ahụ bụ nzọụkwụ dị mkpa: Agwara m ndị na-akwado m na enyemaka m dị njọ nke ukwuu, n’ihi na ejighị m naka na ụfọdụ mkpebi m gbasara blọọgụ ga-esi metụta mmasị ndị na-agụ , ọ nweghị ihe ga-adị ọnụ ahịa karịa nzaghachi ha.
Iji mee ka o doo anya, ịbanye na DA abụghị naanị ihe gbasara ijikwa nzaghachi ị nwetara, kamakwa gụnyere ịbanye na ndị Fanii gị site n’oge ruo n’oge; dịka ọmụmaatụ, site n’ịgụ na ịza ajụjụ banyere ntinye akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ha ma ọ bụ ihe osise kachasị ọhụrụ ma ọ bụ ibe ederede ha. Enwere m ike ịmatakwu banyere nke a n’ikpeazụ n’isiokwu a, ma ọ bara uru ịkpọtụrụ ebe a, kwa.
Echiche nke obodo na DeviantART dị ike; ezinụlọ-dị ka ụzọ. M ga-akọwakwa na post na ụdị omume ọ bụla nke na-agafe ala na spamming na plagiat nwere ike ịda mbà n’obi n’elu ikpo okwu a (ọ bụghị naanị DA; Kingged.com na-arụ otu ụzọ ahụ; iji obodo ahụ bụ ihe inye onyinye na ịnata, nhazi nke abụọ).
Nzọụkwụ 3 – Platformă Jiri na-akwalite
Kedu ihe m simple iji mee ka ndị agbakwunye m blog? Ana m eji akụkụ kachasị ike nke profaịlụ DA m: My Deviant Journal.
Edere m akwụkwọ ọhụrụ banyere ebe m ga-esi kọwaa ihe ụmụ m ga-achọta na akụkọ m na-akọ na ọ bụrụ na ha ga-enwe obiọma dị ka ime ka m mara ihe ha chere banyere ya, ma ọ bụrụ na ha ga -enwe mmasị ịbanye na nzipu ozi pụrụ iche ndepụta maka ndị okenye "hardcore" fani.
Imirikiti ndị bi na obodo DA na-agụ ma na-ekwu banyere ntinye akwụkwọ m karịa nke Deviații m, ya simplu, ọ bụ ebe kachasị mma iji dọta uche mmadụ niile. Ọdee akwụkwọ bụkwa ebe ndị ọrụ DA na-enwetakwu ihe na nkọwa ha, yabụ nzaghachi m natara ebe ahụ nwere nghọta karịa ihe m nwetara n’ebe ọzọ n’elu ikpo okwu.
Ejikwa m DeviantART Jurnal calitate akaụntụ Twitter m maka blog; otu o sila dị, enweghim ihe ịga nke ọma na ya (enweghị azịza banyere ntinye ma ọ bụ naanị ndị na-eso ụzọ 3 ọzọ) Ọ bụghị ọtụtụ ndị egwu na obodo DA na-arụ ọrụ dị kaụ , ọ dịkarịa ala ndị nọ na netwọk m. Agbanyeghị, a na m akpọ gị oku ka ị nwaa ụdị nkwalite mgbasa ozi a kwa; O nere ike ịrụrụ gị ebe ọ na – arụghị m.
2. Edeturu (Ozi nkeonwe)
3. Abateri [art & Ide ederede)
Ụzọ ọzọ iji qualite ọdịnaya gị bụ Ngwa. Nanị bulite otu akụkụ nke ọdịnaya gị (otu edemede, ihe oyiyi ma ọ bụ obere vidiyo) nke na-ejikọta ụdị zuru ezu na blog gị.
Emere m nke a akụkọ mkpirikpi m hapụrụ. Wwere ike ịhụ nseta ihuenyo n’okpuru:
Dịka ị pụrụ ịhụ, edere m naanị paragraf abụọ mbụ nke akụkọ m dị mkpirikpi, emesịkwa m gbakwunye "Na-aga n’ihu …"Jikọọ na nke ọzọ na ya na blog. Wwere ike ime otu ihe ahụ na ihe ọmụmụ gị na ogologo posts.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ndị Fanii na-aza naanị na blog gị ma ọ bụghị na DeviantART, na-ekwuchi ihe gbasara Deviere ma na-akpọ ndị ọbịa gị ka ha kwuo okwu na post gị. Otú ọ dị, ana m akwado ka ịhapụ ọwa abụọ ahụ meghere ma ọ bụrụ na ịchọrọ n’ezie nzaghachi, n’ihi na ọ bụghị onye ọrụ DA ọ bụla ga-achọ ịhapụ ikpo okwu iji kwuo ebe ọzọ.
Ụ bụrụ na ịmepụta ehe eme ihe dị ka ihe ntinye ma ọ bụ na mgbakwunye na posts blog, lee anyk nkwurịta okwu a na DeviantART Forum.
Mgbe ọnwa ole na ole ndị ndị na-egwu egwu m matara gbasara blọọgụ ahụ, achọrọ m nzaghachi ọzọ banyere ya na ihe ndị dị na ya, yabụ ejiri m akwụkwọ akụkọ ahụ ọzọ kerịta nyocha. Eji m DeviantART Note ziga njikọ nke nyocha ahụ nye ndị m maara na agaghị agụ akwụkwọ m.
Ebe a bụ njikọ na ntinye na nyocha ahụ maka ịhụ. Rịba ama na m natara 17 ihe na-adọrọ mmasị na ntinye ahụ naanị ma ọ bụghị na blog.
N’okwu a, ndị na-azaghachi na CTA na-ahọrọ i edeturu na ozi ịntanetị dị ka ụzọ nkwurịta okwu maka nzaghachi.
Dị ka na Kingged, ịnweghị ike ịị spam spam. -Ga-emerịrị mepụta ezigbo mmekọrịta, site n’obi, n ’obi agụụ maka ọdịnaya gị na ọ joyọ isoro ndị ọzọ kerịta ya. N’aka ozo, ag gha aghaghi ibu „onye obi okacha mara”, oburu n’onyeghi onye na-ese nu este aka aka ma ma bu na i tinyeghi akwukwo banyere nka.
Site na ịmepụta na ịzụlite mmekọrịta, ị na-emepụta ihe na-esochi. Lee ụfọdụ ndụmọdụ bara uru iji duzie gị.
Kwado ndị na-eso ụzọ gị na ndị ọkpọ gị dịka ha si akwado gị. Oge ọ bụla ị kwụsịrị n’akụkụ akwụkwọ akụkọ ha na akwụkwọ akụkọ ma ịhapụ nzaghachi na ọrụ ha, -a-azụlite mmekọrịta gị na ndị a, na-ekekọta agbụ nfeịfe Ọ bụ mmalite nke a ọbụbụenyi, iị ị kwesịrị ịba uru dị ka blogger, n’ihi na ọ dịghị blogger nu ike ime ka ọ nọọ n’enweghị ndị na-elekọta ha n’ezie.
Nke a bụ eziokwu maka ikpo okwu ọ bụla ị na-eji, mana DA. Ọzọkwa, ọdịnaya nke ndị na – akwado gị nkeere ike ịgba gị ume ịmepụta ọdịnaya ka mma.
Nke a bụ ihe ị ga-eme ozugbo ị malitere ịza ajụjụ banyere ọrụ gị: zaa ajụjụ ndị a! Enweghị mmekọrịta ga – amalit (ma ọ bụ na – azụlite) ruo mgbe i kwetara ma nyeghachi ndị na – ekwu okwu gị nzaghachi.
Mee ka ndị egwu gị hụ na ị hụrụ ihe ha kwuru. Na nkwanye ugwu, ha ga-esoro gi ogologo ma ghakwa inwehere maka echiche ohuru obula i n’enye n’iru.
Isi nke ndi obodo bu ezi ochicho izute ndi ohuru ma wulite mmekorita gburugburu nka na ide. Ejekwala ire ahia, ekupula spam: ihe ndi ahu bu use oku iji gbafu ndi nu folosesc (nche nche) ma ọ bụ iji kọọrọ ya ndị ọrụ maka spamming.
Ntinye njikọ maka ọdịnaya gị na blog bụ ụzọ isi gaa, ma, "ime ka ọ dị mfe" abụghị naanị maka njikọ – ị ga-agba ndị agbụrụ gị ume ka ị pịa, na iji mezuo nke ahụ, ị ​​ghaghị ịhụ na ha chere mma ime otú ahụ.
Kọwaa otú ihe si arụ ọrụ na saịtị gị, na ị gaghị etinye nzuzo ha, na saịtị gị nwkwa iji chọgharịa ma tinye oge. Ọzọkwa, jikọta ọdịnaya ị na-emepụta na echiche ndị ọzọ ị maara na ha nwere mmasị na ya. Dịka ọmụmaatụ, ụ bụrụ na ha nwere mmasị na foto okike ị nerew foto ma ọ bụ blog njem, kọọrọ ha banyere foto ndị a magburu onwe na akwụkwọ akụkọ njem ị nwere na gị blog. Nye ihe simple i ji chee na ha ga-enwe mmasị na ihe ndị a nke blog gị.
Ọ bụ ezigbo echiche ịmalite site na ilele anya na DA. Iji maa atụ, tu nu ike imepụta ihe osise ma ọ bụ obere infographic nke na-egosipụta post blọgụ gị: tinye ya aha ma bulite ya dịka ihe osise ma ọ bụ ederede ya na onyonyo / ọkọlọtọ wee tinye nkọwa na n nọ akụkụ nke ederede gị.
1. Etichetă Elegharala anya
E nwere ụdị ọdịnaya ndị anaghị ekwe na nhazi DeviantART dị mma, dị ka ndị okenye na-ese foto în ederede.
Ọ bụrụ na ị ga-emerịrị isiokwu metụtara mmekọahụ, ịkpa ókè agbụrụ ma ọ bụ ime ike ihe, he bịla ị biputere ka kwesịrị ịkwanyere ụkpụrụ nduzi ahụ, ụ ebụụ Tinye njikọ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị maka ihe fọdụrụ n’ime ọdịnaya gị.
Dị ka ọ bụla n’elu ikpo okwu, i ọ bụla ọdịnaya na-akwalite ịkpa ókè na ime ihe ike adịghị ekwe ka ọ bụla iwu mba.
Ụ bụrụ na ịnweghị ike iji iwu ụdị foto lee any maka Creative Commons ma ọ bụ Ngalaba ọzọ.
Ụfọdụ ndị na-ese ihe na ndị dere akwụkwọ na-emetụ egwu ma a bịa n’ọrụ mmepụta, yabụ ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ n’ụdị ọdịnaya ọ bụla nke kpaliri gị, jide naka na na ime ikike gị ịmepụta ọrụ mmepụta.
4. Na-eme ike Spam
Ọ bụ ihe a na-anụtụbeghị na ụfọdụ ndị ọrụ DA ga-anwa iji ikike nkwenye nke ihe si na ntinye akwụkwọ (na ntinye akwụkwọ akụkọ, ihe ndịiche na profaịlụ njirimara) iji cală Omume ndị a niile ga-enweta ntaramahụhụ nke ụdị, site na igbochi onye ọrụ (nke onye ọrụ mejọrọ) ruo na akụkọ mkpesa nke nwere ike ibute mmachi na-adịgide adịgide site na ikpo ok ma ma ọ ọ b b ụ akaụntụ.
W nerew ike ịmatakwu otu esi nchịkọta akụkọ na-ele anya nae peeji nke onye ọrụ na foto e a na aka aka nri: meniu ndenye Statistici dị na peeji nke onye ọrụ ka onye ọ bụla pịa ma lelee ya, ọ na-egos na ọnụ ọgụgụ ndị ama ama nke akaụntụ ahụ. Igodo ahụ n’onwe ya bụ obere tebụl ọnụ ọgụgụ, tupu ọ ghọọ "Statistici" na mkpụrụedemede ukwu, dị ka egosiri na foto ahụ. Ugbu a, bọtịnụ m na-egosi:
Site na ịpị bọtịnụ "Ntọala ndị ọzọ" n’okpuru tebụl nke ọnụ ọgụgụ dị mkpirikpi, a ga-akpọrọ gị gaa na peeji statistic na-anakọta ihe niile zuru ezu. Hụ okpuru:
"Vizualizări de pagină în total" na-agwa gị ole ederede w nu erau ka ị bido
"Lere oge X anya" na – agwa gị ugboro ole (n’ozuzu) A na – ekiri ihe ndị dị na galerie gị
"X Deviază na-ekiri" na-egosi ọtụtụ ndị ọrụ DA (ndi mmadu) soro (ekiri) ị
"Natara X kwuru" bụ ọnụ ọgụgụ nke okwu (n’ozuzu) ị nwetara na deviații gị
„Agbakwunye na ọkacha mmasị ọkacha mmasị nke X
„Nyere X kwuru ihe 10 natara” bu nkezi nke ekwuputere na ọrụ ndị ọzọ maka nkwupụta 10 ọ bụla ịnata na nke gị (karịa ọnụ ọgụgụ a, ka ị na-emekọrịta ihe karịa site na ihe
"Iac kachasị amasị ya, ya na X ọkacha mmasị" na – agwa gị ihe ị ga – eme ka ọ bụrụ nke kachasị amasị gị na ọtụtụ ọkacha mmasị ọ natara
"Ntụle kachasị elepụ anya bụ …" na-agwa gị onye otu n’ime Abateri ị nwetara ọtụtụ nlele ihuenyo, na ole
Ọnụ ọgụgụ nchịkọta ọnụ ọgụgụ gị, tinyere ụbọchị ole gafere n’etiti ntinye (na nkezi) na n’ụbọchị ụbọchị n’izu, n’,dị ọnụ ọgụgụ
Ndị ọrụ ọ bụla na DeviantART nu există ohere ịnweta Rezumat taabụ na ibe akụkọ, ebe ndị a na-akwụ ụgwọ (Core) nwere ike ịnweta taabụ ndị ọzọ, nke na-enye nkọwa zuru ezu na ọ naọụ.
Ọbụna dị ka onye nweere onwe ya, ọ bụ ezie na ịwere ike ịhọrọ nhọrọ nhọrọ 3 maka Nchịkọta gị: Oge niile, Afọ gara aga na Ọnwa 6 ikpeazụ. Nke a na-enye aka iji tụnyere arụmọrụ zuru oke gị na ọrụ kachasị ọhụrụ.
DeviantART na-enye ndị ọrụ akwụ ụgwọ aka (Ndị otu akụkụ) iji gbakwunye koodu Google Analytics na profaịlụ ha iji nweta ihe kachasị mma nke ụwa abụọ: nchịkọta okporo ụzọ nyocha na Google.
Hụ onye ọbụla na aha njirimara gị n’elu ogwe dị elu na meniu ọdịda ga-emeghe. PIA "Ntọala". Ị ga-ahụ ndepụta nke ntọala Ntọala na nke Onwe na n’akụkụ aka ekpe nke ibe. Pịa na Onwe -> General wee pịgharịa gaa na Ntọala dị iche igbe; n’ihu ya, ị ga-ahụ igbe nchịkọta Google na ogige iji kpochapụ ID Nyocha gị.
Ọ bụrụ na ịmaghị etu esi eme nke a, pịa „Ebee ka m ga – ahụ ID Nyocha m?"Njikọ na-esote n’akụkụ ntinye.
Jiri DeviantART ma ọ bụrụ na blog gị bụ ihe ngosi, nkà, akụkọ ntụrụndụ, ịzụ ụmụ na ọdịnaya ndị ọzọ ịnere ike ịmepụta n’onwe gị.
Jide n’aka na ịwere obi ụtọ isonye na ndụ obodo gị, n’ihi na ọ bụ ezigbo mmekọrịta nke na-eme ka ihe ịga nke ọma na DA.
Jiri uru data DeviantART este o informație pe Google Analytics.